JOAQUIM SILVA VILELA MGBE
1950 (Eprel 20): Joaquim Silva Vilela mụrụ na Pocrane na steeti Minas Gerais, Brazil.
1960: Vilela kwagara na gọọmentị etiti gbara Brasília na ezinụlọ ya, afọ nke ntinye obodo n'isi obodo ọhụrụ ahụ.
1977: Vilela keere òkè na ụlọ ngosi ihe nkiri mbụ ya. N'afọ sochirinụ (1978) ọ nwetara nrite na 1º Salão de Artes Plásticas das Cidades Satélites.
1977 ma ọ bụ 1978: Vilela gara Ndagwurugwu Dawn maka oge mbụ.
1990s: Vilela hapụrụ eserese wee malite imepụta eserese mmụọ na kọmputa ya site na iji Photoshop.
Joaquim Vilela (b. 1950) bụ onye na-akụzi ihe onwe ya na onye sere ihe mere maka ọtụtụ iconography nke Ndagwurugwu nke Dawn (Vale do Amanhecer), otu n'ime okpukpe ndị ọzọ kacha ibu na Brazil. [Foto a t right] Tọrọ ntọala ya na mbido 1960 site n'aka onye ọkwọ ụgbọ ala na-ejegharị ejegharị na onye doro anya akpọrọ Aunt Neiva (1925-1985), Ndagwurugwu Dawn nwere ụlọ arụsị nwere mmekọ na steeti Brazil ọ bụla yana Portugal, England, United States na mpaghara mba ndị ọzọ. Isi ụlọ ọrụ ya, ụlọ nsọ nne, dị na obodo Planaltina na mpaghara gọọmentị etiti na mpụga isi obodo Brazil nke Brasília. Ihe osise Vilela bu ihe di nkpa nke mmeghari ahu, nke ihe omuma nke Space Age na-achikota ihe ndi sitere na ndi Kristian, mgbaasị, na okpukpe Afro-Brazil, yana Theosophy na omenala ndi ozo.
Dabere na nkuzi ndagwurugwu, mmadụ niile bụ ndị na-ajụ ase ma Vilela na-ekwusi ike na ngalaba nke usoro ya na-enye ya ohere iji anya nke uche hụ akụkụ ime mmụọ karịrị ụwa nkịtị. Usoro a bụ ihe dị mkpa na nrụpụta nka ya. "Onye na-ese ihe bụ onye ọhụụ, onye na-anọchite anya ya," ka o kwuru na nyochaa, "ịdenye aha na ụgbọelu nkịtị nke ọ na-eweta site na mmụọ" (Hayes 2019). Ihe onyonyo nke Vilela mepụtara kemgbe ọtụtụ afọ emetụtala nke ukwuu etu ndị otu Ndagwurugwu siri chee eluigwe na ala ọzọ nke ha na-agbado ọ bụghị naanị omume ọdịnala ha kama ndụ ha. N'ime ime ka ihe ime mmụọ na-adịghị ahụ anya na-ahụ anya, ọrụ Joaquim Vilela na-eme ka ụwa dị iche iche nke ndagwurugwu na nkà mmụta okpukpe siri ike na ndụ maka ndị na-akwado ya. Nsụgharị ya nke ukwuu ghọrọ mmụọ mmụọ ndụmọdụ mentors Central ka Ndagwurugwu nke A na-egosipụta Dawn nke ọma na ebe ọha na ebe ndị ọzọ, ha bụkwa isi okwu maka ekpere na ịrịọ arịrịọ maka mmụọ. [Foto dị na aka nri]
A mụrụ Vilela na 1950, otu n'ime ụmụ itoolu n'ime ezinụlọ Ndị Kraịst na-ezisa ozi ọma na Pocrane, obere obodo na steeti Minas Gerais n'ime ime obodo. Site na nwata, o gosipụtara ezi maka nka ma dee ma kọwaa ya akwụkwọ ọdịmma nke mmụọ ya, nke ịhụnanya ya maka akụkọ ifo akụkọ ifo. Ihe ya masịrị ya karịsịa site na teknụzụ ọdịnihu nke e sere na Flash Gordon comic strips ma na-ewere onye okike ya Alex Raymond onye ọhụụ nke na-ahụ ihe ga-eme tupu amọọ ọgbọ. Ihe osise mbụ nke Vilela na-egosiputa ihe ndị dị egwu, ndị mmadụ na-ahụkarị na nrọ ma ọ bụ na-enwe obi mgbawa nke nwatakịrị nwere akụkọ banyere ndị dike na njem oghere. Ọbụnadị dịka obere nwa nwoke Vilela matara na ụwa echiche ya ka echekwaara onwe ya ebe ọ bụ na okike ndị dị otú ahụ enweghị isi n'ime okwukwe siri ike nke ndị mụrụ ya, ebe enwere naanị Chukwu na ekwensu.
Agbanyeghị na ọ bụ obere oge ka ọ ghọtara nke a nke ọma, Vilela kọrọ na nka ya “nwere mmụọ ime mmụọ oge niile” (Hayes 2019). Ihe onyonyo nke “ndị dị ala, mmụọ na-ata ahụhụ, ihe ndị ọzọ na atụmatụ ịdị adị” pụtara ugboro ugboro n'ọrụ mbụ ọ malitere. Vilela kwuru nke a na iso ndị ọzọ na-emekọ ihe ọnụ, bụ́ nke gosipụtara dị ka "ọhụụ dị egwu ma na-emenye ụjọ." Ahụmahụ ndị a na-ewute onwe ha na nke ha, mana nke ka nke ahụ n'ihi na o chere na ya enweghị ike ịgwa ndị mụrụ ya, sị: “Ahụhụsiri m ike n'ihi na abụ m naanị m enweghị ike ịgwa onye ọ bụla okwu banyere ya n'ihi na nkwenkwe okpukpe nke nne na nna m ekweghị ha kwuo okwu dị otú ahụ. N'ihi na ọ bụrụ na ekwuru ihe ọ bụla, m na-achụpụ ya. ”Wasjọ na-atụ ya iwe iwe nna ya, onye“ ga-enye m ihe, ma na-ekwu na m na-echepụta ihe ”(Hayes 2019). Wingbịaru na eserese nyere Vilela na-eto eto ụzọ ịchekwa ma mejupụta ahụmịhe ndị a.
Na 1960, ezinụlọ Vilela kwagara na mpaghara gọọmentị etiti ọhụrụ ebe gọọmentị Brazil na-ewu isi obodo Brasília. Dị ka puku kwuru puku ndị Brazil ndị ọzọ, mmụọ nke President Juscelino Kubitschek kpaliri ha maka Brazil ọhụụ. Na, dị ka ọtụtụ n'ime ndị a kwagara n'obodo ọzọ, ezinụlọ biri n'otu n'ime obodo satịlaịtị edeghị ede nke na-akụ isi obodo.
Dị ka nwa okorobịa Vilela nwetara ọrụ n'otu ụlọ ahịa na-ebipụta akwụkwọ ma na-arụ ọrụ aka ya n'akụkụ. Ọ na-ekwu na mgbe onye ahịa nyere ya ego buru ibu maka otu eserese ya, obi siri ya ike ịhapụ ụlọ ahịa na-ebi akwụkwọ iji mezuo nrọ ya nke ịbụ onye na-ese ihe. Ọ vowedụrụ iyi na ọ gaghị arụ ọrụ ọzọ maka uru onye ọzọ, n'agbanyeghị na ọ ga-ewe oge tupu ya enwee ike imezu ebumnuche ahụ. Na 1977, Vilela malitere ịbanye na ọrụ ya na ngosipụta ndị na-ese ihe na mpaghara ma merie ọtụtụ onyinye n'ọtụtụ afọ.
N'ihe dị ka oge ọ sonyere na ihe ngosi mbụ ya, otu enyi bịakwutere Vilela banyere ịme ụfọdụ ihe atụ maka nwanne nwanne Neiva, onye bụ mmụọ ama ama na mpaghara. Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ n'oge ahụ, ọ nwere mmetụta na-adịghị mma nke Ndagwurugwu ahụ. Ọ kọwara, "Anyị chere na ọ bụ naanị otu iberibe nzu, na a hụrụ ihe niile gbasara mmụọ mmụọ n'ụzọ na-adịghị mma." Ma ego ahụ chọrọ ya wee kweta izute nwanne nne Neiva.
O wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu n'ihi na ọ sịrị 'ị chere na ị nwere ike imere m ụdị ndị a?' M wee sị 'ee, enwere m ike.' Amaghị m ihe ọ na-ekwu n’oge ahụ. Ma m kwuru, 'n'aka, m nwere ike ime ya.' Enwere m olileanya na m nwere ike ime ya. N'ihi na ahapụbeghị m ịma aka, ihe ịma aka na-amasị m. Mgbe ahụ ọ gwara m ka m dozie nnukwu ọwa, mita abụọ n'ogologo na otu mita n'obosara, n'ihi na ọ dị m mkpa ite ụgbọ elu ime mmụọ ahụ. Ma ama m na echiche nke ihe ọ na-ekwu maka, anụbeghị anụ maka ụgbọ elu ime mmụọ. Ma agwara m ya na m nwere ike tee ha akwụkwọ. M kwadebe kwaaji wee wetara m ya wee bido ihe eserese ahụ. Daysbọchị asaa ka ọ gachara eserese ahụ, nke ọ kpọrọ 'Os Mundinhos'[Bewa Ndị A Hụrụ n'Anya], agwụla' (Hayes 2019). [Foto dị na aka nri]
Ọ kpọrọ ya Os Mundinhos n'ihi na eserese ahụ na - eme ka ihe niile anyị na - akụzi doo anya, ”Vilela kọwara. “Younu nwere akụkụ niile nke ịdị adị, ebumnuche nke mmụọ, mmalite nke ihe niile a na-ese na eserese ahụ. Ọ dị ịtụnanya. Enwekwara m ike ịse ihe osise a ụbọchị iri na asaa. Mgbe m dechara ya, ọ nwere obi ụtọ nke ukwuu wee kpọọ onye ọ bụla ka ọ bịa hụ ya wee gwa ha 'n'ikpeazụ, onye ahụ Nna White Arrow [Nduzi mmụọ nke nwanne Neiva] kwere m nkwa maka afọ 2,000 eruola.' Ọ bụ m. Ọ nọ na-eche afọ 2,000 maka m iji nyere ya aka rụchaa ọrụ ya. (Hayes 2019).
Ọ bụ nnukwu nrọ nwanne Neiva ka ị nweta ihe osise a, ”Vilela kwusiri ike. "N'ihi na ọ bụ otu ihe ịgwa onye, ​​'Lee, ụwa ime mmụọ dị ka nke a ma ọ bụ ya. O bu ihe ozo diri ya igosi ha. N'ihi na site na ahụta ihe na ntanetị, mmadụ nwere ike ịghọta ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ, mmadụ nwere ike ịbanye n'onyinyo ma gaa ebe ahụ ozugbo n'uche ha. (Hayes 2019).
Os Mundinhos bụ mmalite nke mmekorita mmekọrịta n'etiti Vilela na nwanne nna Neiva nke jigidere ruo ọnwụ nke ikpeazu na 1985.
Dị ka onye na-ahụ maka ihe atụ nke Ozizi, Vilela rụrụ ọrụ iji mee ka ọhụụ nke mmụọ nwanne Neiva gaa na nka nke okpukpe nwere taa ọtụtụ narị nke ọrụ dị iche iche na usoro mgbasa ozi. Imirikiti ihe nnọchianya ihe oyiyi na Motherlọ Nne na gburugburu ya bụ site n'aka Vilela ma gụnye eserese nke mmụọ mmụọ na-agba ume nke ukwuu, yana nnukwu (ihe ruru mita itoolu n'ịdị elu), onyonyo akụkụ abụọ nke ọnụ ọgụgụ dị mkpa n'ime mmegharị ahụ dịka Jizọs Christ na Yemanjá, chi nwanyị Afro-Brazil nke oké osimiri. [Ihe osise dị n'aka nri] Ihe osise Vilela chọkwara akwụkwọ nkụzi na baajị na-eyi uwe ndị otu na-arụ n'ụlọ nsọ na-eyi. Vilela na-emepụtakwa ma na-ere ihe osise ya n'ụdị akwụkwọ mmado, kaadị post, mbipụta, na t-shirts, nke a ga-ahụ n'ụlọ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ placesụ, n'ụlọ nri, na ebe ọha na eze na obodo nta gbara gburugburu Motherlọ Nsọ Mama.
Ebe ọ bụ na nwanne mama Neiva nwụrụ, ọrụ imepụta Vilela kachasị emeela ka imepụta eserese enyere ndị ndu mmụọ nke otu otu, na-eji ụdị usoro ọ kpọrọ psycho-pictography. "Psycho-pictography bụ nnukwu njikọta nke usoro ọgụgụ isi, ma ọ bụ ikike ịjụ ase, yana ihe ọmụma nke ịbịaru," ka ọ kọwara. "Have ga-enwerịrị ike teknụzụ ịdegharị ihe ị na-ahụ anya ya, ị ga-enwerịrị ikike ka ị ghara ịda mba n'ime ịdebanye aha ya." Usoro a na-amalite mgbe onye ahịa gwara Vilela aha onye ndụmọdụ mmụọ ha. Ọ kọwara, sị: “Ozugbo m nwere aha nke ahụ, m ghọrọ mpi uche,” mepee ọwa n'ime ihe ndị ọzọ adịghị ahụ anya karịa ụgbọelu nkịtị (Hayes) 2019). [Image na nri]
Dabere na Ozizi ahụ, ọnụọgụ "ihe dị iche iche nke ìhè" so ndị otu ndagwurugwu na-arụ ọrụ dị ka ndị na-eduzi ma na-enye mmụọ. Ha na-akpụzi Indian Space ugbu a, mkpokọta nke ihe dị ndụ nke na-abịa n’ihu ụmụ mmadụ nke na ha gaferela ihe ndị dị na mbara ụwa ma dị ka ume ma ọ bụ mmụọ dị ọcha. Vilela kwuru, sị: “Ha bi n'ihe ndị anyị na-enweghị ike ịghọta. “Ha bu ndi njem si na kpakpando, umu mmadu ndi sitere na usoro ozo di iche” (Hayes 2015). N'ihi na ha dị na mpụga nke ihe ndị dị na mbara ụwa, ụwa ndị a na-efe efe ga-enwerịrị otu ọnọdụ,”Ma ọ bụ ọdịdị ihe, iji soro ndị mmadụ nwee mmekọrịta. Mpempe akwụkwọ ndị a bụ isiokwu nke eserese Vilela. Vilela na-ahụ ọrụ a dịka akụkụ dị mkpa nke ozi ya ma na-eme ka ọnụ ahịa ya dị ọnụ ala ka ndị mmụọ niile nwee ike ịchọta ihe ngosi mmụọ ya.
Ruo ọtụtụ afọ ihe ọ họọrọ bụ mmanụ, ma na ngwụsị 1990s Vilela gbahapụrụ eserese mmanụ niile na ịnabata teknụzụ dijitalụ, ụzọ na-emepe emepe. nke iji Photoshop iji mepụta ihe osise ya. Kọmputa ahụ, dị ka Vilela si kwuo, na-enye ya “ohere iji gosipụta onwe m site na iji teknụzụ dị ọhụụ na nke ọdịnihu, nke na-enye m ngwaọrụ dịka: brọsh, ndị na-achị achị, masks, erasers, removers line, airbrushes, iri isii na nde abụọ na agba nke ìhè, tinyere textures na ọtụtụ ndị ọzọ ”(Vilela 2002). Vilela nwere mbuso agha n'etiti ụfọdụ ndị otu ndagwurugwu, bụ ndị chere na eserese dijitalụ yiri ka ha yiri ma chee na onye na-ese ihe na-eji mmemme kọmputa iji mepụta ha. Ọ na-akwa emo na echiche a. “Ọ bụ enweghị ihe ọmụma, gụnyere usoro, nke bụcha ihe niile n'onwe ya. Have ga-amata usoro a…. Igwe ahụ na - enye gị ihe ndị bụ isi iji rụọ ọrụ, mana ọ naghị adị ndụ, ọ nweghị mkpụrụ obi, ọ nweghị ikike nke usoro iji gosipụta ihe dị na ihuenyo ahụ ” (Hayes 2019). [Foto dị n'aka nri]
Ebe ọ bụ na ị na-aga dijitalụ, ọrụ Vilela niile na-eji Photoshop na kọmpụta desktọọpụ wee bipụta ya na studio ya site na Templelọ Mama. N'ebe ahụ ọ na-azụ ahịa azụmaahịa na-ere ihe onyonyo n'ụdị dị iche iche yana nke ya enyere ikike. [Image na nri] Ihe ndi ozo bu ire ahia bu Vilela derela banyere ihe ndi ime mmụọ na ndi ozo.
Ọ bụ ezie na kọmpụta ahụ bụ “ihe ịtụnanya dị egwu” maka ihe osise Vilela, ọ na-eche ugbu a maka nzọụkwụ ọzọ: “Arọ m nrọ banyere oge m ga-enwe holography, na-arụ ọrụ holography. Ya mere, m na-eche na 3-D: echiche ahụ ị nwere ike imepụta onyonyo nke enwere ike ịkọ dịka mbara igwe. You ga-eche ịbịarute n’ụlọ-nsọ ​​ma hụ ihe oyiyi dị mita atọ n’ogologo, nke ejiri ọkụ, agba ma ọ bụ ume rụọ? Elere dika ikuku elektriki? Ọ ga - abụ ọganihu buru ibu ma kwenyere na ọ ga - abụrụ anyị oge ọhụụ…. …Hụ ihe m na - ekwu? Na mberede enwere ike ịmepụta eserese holographic na, onye maara, ikekwe nyebe ọtụghe ụzọ, ihe pụtara ìhè nke otu ihe. Nke dị ịtụnanya… taa nke a bụ akụkọ ifo nye anyị mana ọ dị nnukwu mkpa maka mgbanwe mgbanwe anyị. ”O kwubiri:" Ekwere m na m na-anọ ntakịrị oge tupu oge m ma m ka nwere ọtụtụ ihe inyocha "(Hayes 2019 ).
Echiche Vilela banyere eziokwu, ebe ọ na-ekwenye n'ozizi Ndagwurugwu, na-agabiga ya n'ụzọ ụfọdụ. O nyochaala nkwenye ya banyere ike na ihe ndị dị adị n'ụwa na akwụkwọ nke ebipụtara nke nwere aha dị ka Ọnọdụ ime mmụọ: ilu nke Psychoanalysis na Neuroscience enweghị ike ịkọwa (Espiritualidade: O Enigma que a Psicanálise ea Neurociência não Conseguem Decifrar) (Vilela 2012) na Site na Atọm nke Mbụ ruo ebighi-ebi (Do Primeiro Átomo à Eternidade) (Vilela, nd). Ọ kọwara ihe omume dị mkpa na ọnụ ọgụgụ dị mkpa na akụkọ ihe mere eme Brazil na akwụkwọ nke ihe osise dijitalụ akpọrọ Brasil: 502 Anos de Vida, Formas e Cores (Vilela 2002).
Site na agba agba ha, akara dị mfe, eserese na ihu ihu, ihe onyonyo Vilela na-echeta ọdịnala nke enweghị ọgụgụ isi ma ọ bụ nka ọdịnala ma gosipụta ụdị nke akụkọ sayensị na ndị isi na-emetụta karịa mmegharị na nka ma ọ bụ nka. [Foto dị n'aka nri] Dị ka Ndagwurugwu Dawn n'onwe ya, ọrụ Vilela na-esite na esoteric na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-agwakọta ihe ndị sitere na Theosophy, Spiritualism na okpukpe ndị ọzọ dị iche iche dị na Brazil na echiche na ihe oyiyi jupụtara na akụkọ ifo, akwụkwọ ndị mmụọ a ma ama. , akwụkwọ ndị na-atọ ọchị, na ihe nkiri televishọn. Nsonaazụ njedebe bụ kaleidoscopic, ma eluigwe na ala jikọtara ọnụ nke na-agwakọta okwu nke oge a dabere na sayensị na teknụzụ yana usoro ihe atụ.
Foto dị iche iche **
** Nnukwu mbubata ihu ga-adị maka foto niile dị na profaịlụ a.
Foto #1: Joaquim Vilela. Nkeji edemede Márcia Alves.
Foto #2: Quadro. Nkeji edemede Márcia Alves.
Foto #3: Os Mundinhos. Site n'aka Joaquim Vilela.
Foto #4: Yemanjá. Nkeji edemede Márcia Alves.
Foto #5: João Nunes. Nkeji edemede Márcia Alves.
Ihe osise #6: Vilela na Ọrụ. Nkeji edemede Márcia Alves.
Foto #7: Loja. Copyright Kelly E. Hayes.
Foto #8: Nduzi. Nkeji edemede Márcia Alves.
Hayes, Kelly E. 2015. Ajụjụ ọnụ Joaquim Vilela, July 15. Vale do Amanhecer, Brazil.
Hayes, Kelly E. 2019. "Abụ m ụche nke uche: Art of Joaquim Vilela." Black Mirror, Ebe ozo 2: 144-77.
Vilela, Joaquim. nd Do Primeiro Átomo à Eternidade. Brasília: Bipụtara.
Vilela, Joaquim. 2002. Brasil: 502 Anos de Vida, Formas e Cores. Brasília: Bipụtara.
Vilela, Joaquim. 2012. Espiritualidade: O Enigma que a Psicanálise ea Neurociência não Conseguem Decifrar. Brasília: Bipụtara.